ठूलो आश्चर्य! टाउको जोडिएका जुम्ल्याहा जन्मिए, डाक्टरले यसरी गरे अलग – Online Saptarangi
ठूलो आश्चर्य! टाउको जोडिएका जुम्ल्याहा जन्मिए, डाक्टरले यसरी गरे अलग
October 20, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on ठूलो आश्चर्य! टाउको जोडिएका जुम्ल्याहा जन्मिए, डाक्टरले यसरी गरे अलग
बीबीसी । सन्सारमा धेरै आश्चर्यजनक सफलता भएका छन् । पछिल्लो समय चिकित्सा विज्ञानको अर्को सफलता भनेको टाउको जोडिएर जन्मिएका जुम्ल्याहाको टाउको अलग पार्नु पनि हो । यस्तै सफलता बेलायतको एक चिकित्सा टोलीलाई प्राप्त भएको छ ।
यो गत बर्षको घटना थियो । त्यसपछि उनीहरु एक बर्ष सम्म डाक्टरको निगरानीमा थिए । उनीहरुको गत वर्ष लण्डनस्थित ग्रेट ओरमोन्ड स्ट्रीट अस्पतालमा सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेर छुट्याइएको थियो । अब डाक्टरले उनीहरुलाई अस्पतालबाट बिदा दिएका छन् र पाकिस्तानस्थित आफ्नो घर फर्किएका छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
सफा र म’र्वा बिबीको गत वर्ष तीनवटा अपरेशन गरिएको थियो । जसमा उनीहरुले अपरेशन थिएटरमा ५० घण्टा बढी समय बिताउन परेको थियो । उनीहरुको आमा जानियाब बिबीले परिवारका अन्य सदस्यहरुसँग घर फर्काउन पाउँदा आफू निकै हर्षित भएको बताइन् ।
‘उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ । म’र्वाको अवस्थामा राम्रो सुधार भइरहेको र उनलाई कमै सहायता चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सफालाई भने अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ । भगवानको कृपाले एक दिन दुबै हिँड्न सक्नेछन् ।’
शरीर जोडिएर जन्मने जुम्ल्याहाहरु निकै दुर्लभ हुन्छन् । त्यसमाथि त्यस्ता २० जुम्ल्याहामध्ये १ जोडीको मात्र टाउको जोडिएर जन्मन्छन् । यस्ता जुम्ल्याहाहरु धेरै समय बाँच्न सक्दैनन् ।
यी जुम्ल्यहालाई सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा सफलतापूर्वक अलग गरिएको थियो । त्यसयता उनीहरु आफ्नो आमा र अंकलको साथमा लण्डनमा नै बस्दै आएका थिए । उनीहरुको उपचार तथा बसोबासमा लागेको करिब १० लाख पाउन्डको खर्च पाकिस्तानका व्यवसायी मुर्तजा लखानीले व्यहोरेका थिए ।
साढे तीन वर्षका ती बालिकाहरुलाई हिँड्न सहयोग गर्न अहिले फिजिकल थेरापी भइरहेको छ । दुवैलाई सिक्न भने कठिनाइ भइरहेको छ ।
November 19, 2020 Prakash Waiba
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना’बाट हाल’सम्म ५० जनाको मृ’त्यु
सरकारले थाल्यो फेरि लक’डाउन गर्ने तयारी ! यी क्षेत्र बन्द गर्न निर्देशन
October 17, 2020 October 17, 2020 Prakash Waiba